Duufaantii oo hawada ka saartay warbaahintii raadiyaha ee Jämtland - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Duufaantii oo hawada ka saartay warbaahintii raadiyaha ee Jämtland
La daabacay tisdag 19 november 2013 kl 13.40
Duufaantii maalmihii sabtida iyo axadda ku dhufatay qaybo ka mid ah dal ayaa dadka ku nool meelaas geyeysiisey in ay habeeno iyo maalmo badan gafaan warar muhiim ah.
Duufaantaas oo xoog badnayd ayaa gebi joojisey wararkii raadiyaha oo laga baafinayey laba tiir oo ah kuwa wararka laliya oo aaggaas ku yaalley. Labadaas midkood wuxuu hawada ka maqnaa muddo ku dhow laba habeen iyo laba maalin, halka kan kale uu hawada ka maqnaa muddo intaas ka badan.
Waxaa labadaas tiir shaqayntooda mas’uul ka ahaa shirkad lagu magacaabo Teracom oo iyadu maareysa siideynta barnaamijyada Raadiyaha Iswiidhen iyo wixii kale oo warar ah. Balse in warbaahintu gebi ahaanba istaagto ma ahayn in ay caadi ahaan dhacdo maadaama ay tiirarkaas warbaahintu badanaaba leeyihiin awood kayd ah. Laakiin waxaa muuqata in aysan jirin kayd lagu beddelo.
Staffan Edler oo ah agaasimaha golaha gobolka u qaabbilsan arrimaha badbaadada iyo diyaargarowga markii ay dhacaan musiibooyin halis ayaa yiri:
- Waxaan qabaa in ay tahay wax aad u xun oo ma garanaayo meesha wax laga qabanayo. Laakiin waa su’aal u baahan inaan wax ka qabanno.
Maxay arrintaani khatar ugu tahay?
- Waxaa dhici kara in ahayd in ay jiraan warar muhiim ah oo ay ahayd in la gudbiyo, tusaale ahaan in dadka loo sheego meeshii ay biyo ka soo qaadan lahaayeen. Maamulka degmadu wuxuu muwaadiniinta u gudbiyaa warar muhiim ah oo raadiyaha loo mariyo.
Isha: P4 Jämtland